Viva Polisii naannoo oromiyaa Magaalaa Adaamaatti Shugguuxiin seeraan alaa 17 fi uffatni seeraan alaa geejibsifamaa ture qabame. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsViva Polisii naannoo oromiyaa Magaalaa Adaamaatti Shugguuxiin seeraan alaa 17 fi uffatni seeraan alaa geejibsifamaa ture qabame.
Bulchinsa Magaalaa Adaamaatti Sakkata’iinsa tasaa gaggeeffameen Shuguuxiin seeraan alaa 17 fi uffatni seeraan alaa geejibsifamaa ture qabame.
Shugguxiiwwan qabaman keessaa 15 konkolaataa Hyiruufii magaalaa Fifinnee gara Adaamaatti imaalaa ture keessatti qabame. Shuguxiiwwan kunneenis kanneen Tuurki Istaar jedhaman akka ta’e Itti gaafatamaan Qajeelcha Poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Komaandar Darajjee Mul’ataa himan.
Bifuma walfakkaatuun sakkata’insa taasifameen konkolaataa mana VITZ jedhamtu keessattis shugguxiin lama qabamu himaniiru.
kana malees uffanni fi kopheen torshinii seeraan ala konkolaataa manaatiin geejibsifamaa tures har’a magaalaa Adaaaatti qabamu Komaandar Darajjeen himaniiru. Gabaasni kan qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaati.
Kaayyoon dhugaa qormaataaf jacha hin warraaqu!!
Namichaatu osoo karaa deemuu jawwee belbela ibiddaan marfamee lubbuu of baraaruuf ibidda gidduu rakkatu arge. Callisee bira darbuuf garaan isaa dadhabee rifateefii jawwee kana baraaruuf mala yaade. Yoo harkaan qabee baasuuf yaale akka iddu waan beekuuf muka dheeraan darbee keessaa baasuuf murteesse.
Akkaataa kanaan muka dheeraa tokko fuudhee itti laatee. Haa ta’uu malee muka kana akkuma biraan gaheen jawwichi kun muka kanarra loohee dhufee harka namicha ibidarraa baraaruuf jedhuu kana iddee achumaan utaalee dhagaa tokko jalatti dhokate.
Gocha kana dhaabbatee ilaalaa namichi ture tokko namicha jawwee gargaaruuf jedhee of miidhe kanaan akkana ja’een “yaa namichana jawween akka nama ciniintuu fi diina ilma namaa taate ni beeytaa mee maalumaaf diina keetti harka laattee lubbuu kee balaaf saaxilta? Ati kan osoo beekuu isii gargaaruuf yaaleetu balleessaa qaba malee jawween kun balleessaa hin qabu” ja’ee itti dubbate.
Garuu namichi idddame kun immoo akkana ja’een aniis balleessaa hin qabu jawween kuniis balleessaa hin qabu, anii nama gargaaruufiin uumame,jawween immoo wa idduuf uumamee waan taheef harka isa baraaruuf hiixate ciniine. Ani kaayyoon kiyya jawwee kana ibidarraa baraaruuf waan taheef na iddullee ibidaarraa isa baraaruu waaniin dandaheef wantiin yaade naaf milkaaheera.
Kanaafuu nu lachuu waanuma uumamneef hoojjannee waan taheef gochi badaan isheen narratti raawwatte kaayyoon uumameef na hin jijjiirsisu jachuun deebiseef.
Dhugaadha jawween hojiin isii idduudha malee yoo lubbuu ishee baalaa irraa oolchitees gaalata hin beeytu.
Gocha badaa qaama sadaffaa ilaaltee kaayyookee hin jijjiirin!!
#Maddi:- kan dubbisnerraa fooyya’ee qophaahee kan dhihaateedha.